LAMA FILAAN: Waakan Wakiilka Qarsoon Ee Ka Caawinaya Barcelona Inay Sii Haysato Lionel Messi - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLAMA FILAAN: Waakan Wakiilka Qarsoon Ee Ka Caawinaya Barcelona Inay Sii Haysato Lionel Messi
LAMA FILAAN: Waakan Wakiilka Qarsoon Ee Ka Caawinaya Barcelona Inay Sii Haysato Lionel Messi
June 27, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka La Liga 0
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta ayaa shaaca ka qaaday in saxeexa cusub ee kooxdiisa ee Sergio Aguero uu yahay mid si weyn uga caawinaya kooxda inay sii haysato kabtankeeda Lionel Messi oo mustaqbalkiisa wali shaki ku jiro.
Weeraryahankii hore ee Manchester City ayaa horraantii bishan si rasmi ah ugu biiray Barcelona kaddib markii ay kooxdaasi wax heshiis kordhin ah u samayn weyday.
Aguero iyo Messi ayaa ahaa kuwo si wadajir ah uga soo tirsanaa xulka Argentina 15-kii sano ee ugu dambeeyay iyaga oo hal qol wada dega marka ay waajibaadka qarankaasi ku maqan yihiin.
Saxeexa Barcelona ee Aguero ayaa la filayay inay dedejin doonto wadahadalada u dhaxeeya Messi iyo Barcelona iyadoo in kooxdaasi ay la wareegto dhaliyahaasi ay ahayd mid kamida waxyaabaha ka caawinaya heshiis kordhinta kabtankeeda.
Madaxweyne Laporta oo markii labaad loo doortay madaxweynaha Barcelona bishii March ayaa haatan sheegay in Aguero uu maalin kasta u sheegayo Messi inuu kooxda sii joogo si ay u wada ciyaaraan.
Joan Laporta oo waraysi siinayay warsidaha La Vanguardia ayaa yidhi “Waxaan jeclaan laha inuu Messi nagu yidhaa ‘Haa’ sida ugu dhakhsaha badan ee ugu macquulsan, isagu dariiqo kasta wuu noo caawin lahaa, Aguero ayaa na caawinaya, isaga ayuu u sheegayaa maalin kasta inuu sii joogo”
Messi oo toddobaadkan u dabaaldegay dhalashadiisii 34-aad ayaa heshiiskiisa Camp Nou yahay mid dhacaya dhammaadka bishan June ee maalmaha tirsani ka hadheen.